सवारी दुर्घटनामा परी उपचारत कलाकार निसा घिमिरेलाई आर्थिक अभाव, गायिका टीका सानुले गरिन् सहयोगको अपिल ! – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ३०, २०७८ समय: १२:५५:४५
काठमाडौं ।कलाकार निसा घिमिरे अहिले जिवनमरणको दोसाँधमा हुनुहुन्छ । उहाँको जीवन रक्षाको निम्ति अनेकौं सकारात्मक मनहरु विभिन्न अभियान मार्फत जुट्दै हुनुहुन्छ । उहाँको कलाकारीता राम्रो हुँदै थियो तर पढाईको क्रममा भारत जाँदा सवारी दुर्घटना भएर अहिले ओछ्याना छटपटाई रहनु भएको छ ।
आर्थिक अभा’वको कारण कलाकार घिमिरेको उपचार हुनसकेको छैन । समाजसेवी लगायत अभियान्ताहरुले अभियान चलाएर सहयोगको अपिल गरेका कुरा संजा’लमा देखिन्छ। सहयोगी मनहरु पनि आउँदै हुनुहुन्छ । यसै क्रममा कलाकारहरुले पनि बारम्बार अप्डेट गर्दै आउनु भएको छ ।
चर्चित गायिका टीका सानुले कलाकार घिमिरेको यो अवस्था देखेर देखेर भावुक हुँदै सबै समक्ष घिमिरेको जीवन बचाई दिनको निम्ति सहयोगको अपिल गर्नुभएको छ । उहाँले मनको भावना पोख्दै जीवन केही नै रहेनछ कुन बेला के हुन्छ अत्तोपत्तो हुन्न भन्दै यस्तो लेख्नु भएको छ :
“मान्छे को जिन्दगी के नै रैछर? नेपाली कला क्षेत्रमा जम्दै गरेको एउटा नाम निशा घिमिरेको यो अवस्था देख्दा नि:शब्द छु। कलाकारितामा उच्च शिक्षाको क्रममा भारतमा सवारी दुर्घटनामा परि उपचारको अभावले यो अवस्थामा पुगेको देख्दा साह्रै दुखि छु!
पहिले र अहिलेको यो अवस्था देख्दा मेरो मात्र होइन देख्नी जो कोहिको पनि आँखा रसाउछ होला सायद! एउटा राष्ट्रको गहना निशा उपचारको अ’भावले जीवनमर’णको दोसाँधमा हुनुहुन्छ। मेरो अनुरोध हाम्रो सानो सहयोगले निशा पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्नुहुन्छ त्यसैले स’हयोगी मनहरुले सहयोग गर्न चाहनु भयो भने कृपया तल दियको खाता नम्बर वा सिधै फोन गरेर पनि साथ दिन सक्नुहुनेछ।